जानकी मन्दिरको लागि योग्य को हो ? -दीपकराज भण्डारी: सिमानापारी डट कम simanapari.com
भारतीय नाकाबन्दी, मधेशीहरुको आन्दोलनकै बिचमा राष्ट्रपतीको जानकी मन्दिर भ्रमण प्रकरणले नेपाली राजनीति र समाज पुन तरङित भएको छ । यो प्रकारण सँगै पक्ष बिपक्षमा नेपाली समुदाय राय र अभिब्यक्तीका आधारमा बिभक्त देखिएका छन । केही मधेसी नेता कार्यकर्ता र अगुवाहरुबाट नारी दमनका अभिब्यक्ती सँगै हिन्दू धर्म र सन्स्क्रितीको नै अपमानजन्य कार्य हुन पुग्यो । सबैको आफ्नो आफ्नो छक्का दाउ भने जस्तै आफ्नो आफ्नो राजनैतीक दुनो सोझ्याउनको लागि जानकी मन्दिर प्रकरणलाई बिभिन्न रङ रोगन दिने कोशीस गरिएको छ । यध्यपी राष्ट्रपती र जानकी प्रकरणको दुरगामी असरलाई नियाल्ने हो भने नेपाली राष्ट्रिय एकता र अखन्डता अक्षुग्ण रहने कि न रहने भन्ने सारगत प्रश्नहरुको गम्भिर उत्तरहरु माग्दछ ।
सन्दर्भको सुरु गरौ राष्ट्रपती नामक संस्थाको प्रकार्य, महिमा र महत्वबाट । राजतन्त्रको उन्मुलनसगै जनताका प्रतिनिधि निस्चित बिधीबाट चुनिएर राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रिय अभिभावकिय भूमिकामा उपस्थित हुने जसलाई समग्र राष्ट्रकै मियो मानिने अबधारणाबाट सम्माननिय संबैधानिक राष्ट्रपती जस्तो संस्थाको परिकल्पना गणतान्त्रिक नेपालले गरेको हो । नेपालले पाएको दुबै राष्ट्रपतीहरु बिधिवत प्रजातान्त्रिक बिधीबाट चुनिएका र स्थापित गरिएका हुन । राष्ट्रपती ब्यक्ती नभएर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो जसको सम्बन्ध नेपाली राष्ट्रिय अखन्डतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडीन्छ ।
बर्तमान राष्ट्रपतीलाई उनको बिगतको राजनैतीक भूमिकाको आधारमा हेर्ने दृष्‍टिकोण अग्रगामी र दुरगामी दुबै हुँदैन बरु यस्तो रबैयाले संबैधानिक राष्ट्रपती जस्तो संस्थालाई कमजोर बनाउछ जुन राष्ट्रिय अखन्डताको लागि घातक बन्न पुग्छ ।
राष्ट्रपतीमाथी प्रहार गर्नु पूर्व आन्दोलनरत पक्ष र सबै राजनैतीक संघसंघठनले बिधिवत रुपमा चुनावमा भाग लिएर प्रजातान्त्रिक पद्दतीबाट चुनिएको हो कि होइन त्यसको जवाफ दिनु पर्छ । यदी राष्ट्रपती बैधानिक हो र सबै पक्ष निस्चित बिधीमा सहभागी भएर चुनिएको हो भने राष्ट्रका हरेक अबसरमा अभिभावकिय भूमिकामा रोक्न खोजिनु कुन नैतीकताको परीधी भित्र पर्दछ ? धर्म निरपेक्षताबादीको आरोप सहीत राष्ट्रपतीको जानकी मन्दिर प्रबेश योग्य छैन भने भोली हिन्दू धर्ममा नै आस्था राख्ने कोही दलित राष्ट्रपती बन्यो भने के गर्ने ? मन्दिर प्रबेश गर्ने दिने कि बिरोध गर्ने ? यदी छेत्रीय कारणले राष्ट्रपतीको बिरोध गरिएको हो भने भोली मधेशी राष्ट्रपतीलाई पहाडमा के गर्ने ? कि हरेक प्रान्तमा एक एक स्थानिय राष्ट्रपती चुन्ने ? अनी त्यसो गरिदा राष्ट्रिय एकता र अखन्डताको मुल मर्म के हुने ?
तसर्थ जानकी मन्दिरको सवाललाई लिएर धार्मिक, सान्स्कृतिक, राजनैतीक कुनै पनि कोणबाट गरिने प्रहारले कालान्तरमा राष्ट्रिय अखन्डतालाई नै कमजोर बनाउछ । नत्र जानकी मन्दिरमा राष्ट्रिय एकताको बिम्बको रुपमा प्रतीनिधित्व गर्न रास्ट्रपती बाहेक अर्को को योग्य छ त्यसको उत्तर दिन सक्नु पर्दछ ।